ကျနော်ငယ်ငယ်က အမေနဲ့ အပြင်လိုက်သွားတိုင်း လမ်းဘေးမှာ တောင်းစားနေ ကြတဲ့ ကလေးတွေကို ပြပြပြီး ကျနော့်ကို ဆုံးမလေ့ ရှိတယ်။
"တွေ့လား သား...ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနော်...ပညာမတတ်ရင် သား သူတို့လို လက်ဖြန့် တောင်းစားနေရလိမ့်မယ် သားရဲ့၊ အမေပြောတာ နားလည်လား သားဘဝ အဆင့်အတန်း တိုးတက် မြင့်မားအောင် ပညာက ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မယ် နော် သား" တဲ့...
ကျနော့် အသည်းထဲ ရင်ထဲ စွဲထင်ခဲ့ရတဲ့ အမေ့ရဲ့စကား....ကျနော် ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး အမေ...။
"ကိုရေ...ကို့သားအငယ် ကွန်ပြူတာသင်တန်းကြေးရယ်၊ တရုတ်စာသင်တန်း ကြေးရယ် နောက်တပတ်ကျရင် ပေးရတော့မယ်နော်..."
"ဟေ အေး အေး"
"ကိုရေ...အကြီးကောင်ကို ဂိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ ဆရာမလေးကို ဒီလအတွက် ပိုက်ဆံပေးရ အုံးမယ်နော်...ဆရာမလေးမျက်နှာမြင်တိုင်း အားနာစရာတောင် ကောင်းနေပြီ...."
"ကိုရေ...ဒီလကုန် ဟိုဘက်လမ်းထိပ်က မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်ထားတာ လက်ဖွဲ့ဖို့ ပိုက်ဆံချန် ရအုံးမယ်နော်..."
ဖတ်လက်စ သတင်းစာကို လက်က ချ၍ ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချမိလေသည်။
အသုံးစရိတ်တွေ...အဲဒီ အသုံးစရိတ်တွေကို ဘယ်လို ချူံ့ရပါ့...။ မအားလပ်ဟု အကြောင်းပြ ၍ မင်္ဂလာပွဲ မသွားရင်ရော...၊ ဒါမှမဟုတ် သတင်းရယ်လို့ ဘာမှ မထူးလှသော နေ့စဉ်သတင်း စာကို မယူတော့ပဲ ဖြတ်လိုက်လျင်ရော... ဒါဆို ဒီတလ ငွေပိုနဲနဲ ထွက်လာနိူင်မလား တွေးရင်း ကပင် ကျနော့် စိတ်အစဉ်သည် ငွေကုန်ပေါက်တွေကြား မလူးသာ မလွန့်သာ ရှိနေလေသည်။
အိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီး မြတ်နိူးရသော ဇနီးသည်မှ ချစ်စရာ သားကလေး ၂ ယောက် မွေးဖွား ပေးခဲ့သည်။ အမေ့စကား နားထောင် သော ကျနော်သည် ပညာတတ်ကြီးဖြစ်၍ ရုံးကြီးတရုံး၏ ဌာနတခုဝယ် အရာရှိပေါက်စလည်း ဖြစ်နေပါသေးသည်။
"ဆရာ ဒီတပတ် အတွက်"
"အေး အေး ကျေးဇူးပဲကွာ"
ကျင့်သားရနေသော လက်တို့က အံဆွဲထဲသို့ အထုပ်ကို ရှောကနဲ ထည့်ပြီး ဖြစ်လေသည်။ ကျနော်တို့ ဌာန၏ တပတ်စာ ရှင်းတမ်း၊ အတိ အကျ ပြောရလျင် ဝေစုခွဲတမ်း...။ ကြားပေါက် ဝင်ငွေကောင်းသော ရုံးကြီးဖြစ်သည်ဟု ဟိုစဉ်က ကြားသိခဲ့ဖူးရုံသာ။ အလုပ်ဝင်ကာစ နဖူး တွေ့ ဒူးတွေ့တွင်မူကား ထိုငွေများကို လက်ခံ၍ အိပ်ထဲထည့်စဉ် ကျနော့် မျက်နှာတခုလုံး ပူနွေး သွားခဲ့ဖူးသည်။
ကျနော်မယူလျင် ကျနော့်တယောက်စာဝေစုကို သူတို့ပင် ပို၍ ခွဲဝေယူကြ မည်တကြောင်း၊ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း မလွန်ဆန်နိူင်စွာ မက် မောမိသည်က တကြောင်း.....။ ထိုအကြောင်းများ ကြောင့်ပင် လူညီ၍ "ဤ" ကို "ကျွဲ" ဟု ဖတ်သူများထဲတွင် ကျနော်တယောက် လည်း အပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။
အမေ့ ဆုံးမဩဝါဒကြောင့် ပညာကို ကြိုးစား သင်ယူခဲ့၍ ပညာတတ်ကြီး တယောက် ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ စားဝတ်နေရေး အပြေလည်ကြီး မဟုတ်သည့် တိုင် လည်ပတ်နေသေးသည်။ လူပုံအလယ် ပညာတတ် အရာရှိမင်းဟု ပွဲလယ်တင့် နေသေးသည်။ သို့တိုင်အောင် အမေ ပြောခဲ့ဖူးသလို လက်ဖြန့်စရာ မလိုသော ဘဝမှာ ရောက်နေပြီတဲ့လား..ကျနော် မသေချာပေ...
သေချာသည်မှာ ကျနော် ည ည နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မပျော်နိူင်သေးသည်ပင်...
Anonymous Wed May 19, 09:10:00 PM GMT+8
Great work, interesting blog
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Wed May 19, 09:12:00 PM GMT+8
ကိုဇော် Wed May 19, 09:53:00 PM GMT+8
ကျနော် မနက်ဖြန်တင်မဲ့ ပို့စ်နဲ့ အမနဲ့ တိုက်နေပြီ။
မောင်မိုး Wed May 19, 10:36:00 PM GMT+8
လာဘ်ပေးတာကို လက်ခံတာပါ။ လာဘ်ယူတာမဟုတ်ဘူး။
ဇွန်မိုးစက် Wed May 19, 11:20:00 PM GMT+8
အင်း.... ခေတ်ကြောင့်၊ စနစ်ကြောင့်၊ အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သီလချို့ယွင်းလာသူတွေ အပြင်လောကမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်တောင် ရှိနေပြီလဲ မသိဘူး။
သီလတကယ်လုံဖို့ဆိုတာ ပြောသလောက် မလွယ်ဘူး မရေ။
တိုပေမယ့် ပေးချင်တဲ့ မက်ခ်ျဆေ့ရတယ်။
ညီမလေး Wed May 19, 11:59:00 PM GMT+8
ညီမလေး Thu May 20, 12:00:00 AM GMT+8
ဘာမှမပြောတော့ပါဘူးလေလို့ ပြောတာပါလေ။ မှားတောင်ကုန်ပြီး)
Vista Thu May 20, 09:58:00 AM GMT+8
း) တပည့်တွေ ဆီကလာတာလို့ မှတ်လိုက်ပါ ဟားဟား...
ဒီလိုဟာတွေ စိတ်ကုန်လို့ ငယ်ငယ်လေးထဲက
အပြင်အလုပ်ပဲလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာ။
အင်ကြင်းသန့် Thu May 20, 10:58:00 AM GMT+8
ဒါ ဂါရ၀တရားလို့ ခေါ်တယ်ကွဲ့ အဟင်းဟင်း...
သဒ္ဓါလှိုင်း Thu May 20, 11:40:00 AM GMT+8
Anonymous Thu May 20, 11:50:00 AM GMT+8
မိုးခါးရေ မသောက်ချင်လို့ ကြုံရာကျဖမ်းအလုပ်ကလေးဘဲ လုပ်နေပါတယ် အခုခေတ် အမေနေရာ ဆရာနေရာက နေပြီး ဘယ်လိုတောင် ဆုံးမရမှန်းမသိတော့ မင်းတို့ ပညာတတ်အောင်သင် ပညာတတ်မှ... .. ဘာညာ....ဘာညာ...ကွိကွ.....
ခိုင်နုငယ် Thu May 20, 06:00:00 PM GMT+8
ဝေလင်း Thu May 20, 06:59:00 PM GMT+8
မယူလိုက်က မိုက်တယ်လို့ ထင်မှာစိုးရှာလို့ နေမှာပေါ့
kay Thu May 20, 09:40:00 PM GMT+8
ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ၀တ္တုတိုကောင်းလေး ..မ
သံလွင်က..လဘ်ပေးလဘ်ယူ ခေါင်းစဉ် အတွက်တောင် သုံးသင့်တာ..။
.( ထွင်းထု ပျိုမြစ်) ဆိုတာ.. က..ဆန်းနေပါလား..း)
TZA Fri May 21, 09:30:00 AM GMT+8
တရုတ်စကားပုံမှာတော့ ကျီးကန်းမှန်ရင် မည်းတာချည်းပဲ တဲ့။ ကိုယ်က ဖြူနေရင် တခြားကျီးကန်းတွေ ဝိုင်းသမမှာစိုးပြီး အမည်းရောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ ကျီးဖြူတွေ မြန်မာပြည်မှာ ဒုနဲ့ဒေးနေမှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မျိုးဆက်တဆက်ပြီးတဆက် မည်းကုန်ကြတာ။
shwezinu Fri May 21, 11:07:00 AM GMT+8
ဝေစု ခွဲရတာပျင်းတယ် အကုန်ယူမယ်
~ဏီလင်းညို~ Fri May 21, 01:25:00 PM GMT+8
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့.......
စတဲ့ အကြောင်းတွေ စုပေါင်းသွားလို့ လက်ခံနေရပေမယ့် ရှက်တတ်ရင် အရမ်းရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်မိတယ်....။
ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို အစမလုပ်ခဲ့တာ အကောင်းဆုံးပဲနော်ဗျ.....။
(ခုမှ ရောက်တယ် မကြီးရေ...............)
နွေးနေခြည် Fri May 21, 04:12:00 PM GMT+8
သက်ဝေ Sat May 22, 06:12:00 PM GMT+8
လူညီလျှင် ဤ ကို ကျွဲ လို့ ဖတ်ကြရတော့မှာ တကယ်ပဲလား...
မြသွေးနီ Sat May 29, 06:17:00 PM GMT+8
မိုးခါးရေမှ မသောက်ရ မနေီုင်ဖြစ်လာကြရတာ..
နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ရေး၀၀အိပ်ရတာကို မက်မောမိတယ် မချစ်ရေ..။